Barnaamijyada Aqoonyahannada Aasaasiga ah ee MasterCard ee KNUST, Ghana 2020 2022
March 5, 2020 Okpara Francis
Khidmadaha Lacagta Lacag-bixinta ee Fiican Barnaamijka Aqoonyahannada FoundationCard Foundation ee KNUST, Ghana 2020
Jaamacadda Kwame Nkrumah ee Sayniska iyo Teknolojiyada waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo Barnaamijka Aqoonyahannada ee MasterCard Foundation sanad dugsiyeedka 2020-2021.
Abaalmarinta ayaa u furan ardaydaas caalamiga ah ee doonaya inay wax ka bartaan koorsada shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Waxaa la aasaasay 1952, KNUST waa jaamacada dadweynaha ee Ghana oo bixisa shahaadada koowaad, shahaadada koowaad, cilmi baarista, Phd, barnaamijyada shahaadada jaamacadeed. Waxay sidoo kale siinaysaa jawi u gaar ah ardayda leh waxbarasho wanaagsan.
Jaamacad ama Urur: Kwame Nkrumah University of Science iyo Teknoloji
Heerka Koorsada: Shahaadada koowaad
Hab Helitaan: Online
Abaalmarinta waa la qaadan karaa Ghana
Dalalka u Qalma: Ardayda dibedda joogta waxay xaq u leeyihiin abaalmarintan.
Koorso La Aqbali karo ama Maado Kafaalaqaadka ayaa loo heli karaa shahaadada shaqada koorsada ee maaddo kasta oo ah KNUST.
Si aad uga qayb qaadato barnaamijkan, codsadayaashu waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
Dhammaan Codsadeyaasha leh WASSCE ama GBCE ama ABCE ama GCE O'Level iyo A'Level ama natiijooyinkooda u dhigma ee ka socda hay'ad la aqoonsan yahay ayaa xaq u leh deeqda.
Ardaydu waa inay muujiyaan inay leeyihiin baahiyo dhaqaale oo muhiim ah
Mudnaanta waxaa la siinayaa dumarka, barakacayaasha, iyo dadka naafada ah
Musharrixiinta waa inay lahaadaan diiwaanno la caddeeyey oo ku saabsan hoggaaminta iyo ka-qaybgalka bulshada.
Codsiga Deeqda Waxbarasho
Sida loo Codsado: Si loo hanto fursaddan, kuwa hamiga leh waxaa looga baahan yahay inay qaataan gelitaanka gudaha KNUST. Taas ka dib, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad soo dejiso foomka codsiga internetka oo ku soo gudbi EMS ama adeeg kasta oo kale oo loo diro maamulaha barnaamijka, barnaamijka aqoonyahannada aasaasiga ee MasterCard ee xoghaynta KNUST? xafiiska hormuudka ardayda boorsada gaarka loo leeyahay ee KNUST, Kumasi, Ghana.
Taageerida Dukumentiyada: Codsadeyaashu waa inay soo gudbiyaan shahaadada dugsiga sare, saddex waraaqo tixraac ah, Shahaadada Dakhliga, qoraallada, iyo shahaadada dhalashada.
Shuruudaha Ogolaanshaha: Kahor intaadan gelin, waxaad u baahan tahay inaad hubiso dhammaan shuruudaha gelitaanka jaamacadda.
Shuruudaha Luqadda: Codsadeyaashu waa inay soo gudbiyaan wixii caddayn ah ee ay hayaan English kartida luqadeed.
Dheefaha deeqaha waxbarasho
KNUST waxay bixin doontaa dhammaan faa'iidooyinka soo socda:
Lacagta waxbarashada ee buuxda
Guryo si buuxda looga bixiyo hoyga xerada
Gaadiid iyo gunno bille ah
Adeegyada Taageerada La-talinta
Adeegyada Horumarinta Xirfadaha.
ugu dambaysa ee arjiga: May 1, 2020.
Deeqda waxbarasho ee Ghana Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho
Previous Post:Codso Hada: Ardayda 800 ee Loo Xulinayo Barnaamijyada Dhexe ee UND Scholarship ee Mareykanka, 2020
Post Next:Khidmadda Khidmadda Lacagta ee Waxbarashada Madaxweynaha ee Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadda Fordham, USA